The best olfactory mats embwa | Imbwa dzeNyika
Meti anonhuwa embwa rudzi rwetoyi inonyanya kubatsira muimbwa dzinenge dzanyanya kushanda uye kuti, pamusoro pekufamba kwadzo kwezuva nezuva, dzinoda imwe dhamu yekurovedza muviri (kunyangwe mune iyi nyaya iri pfungwa) kudzikama.
Ndicho chikonzero Nhasi hatizongotaura chete nezve akanakisa olfactory mats embwa, asiwo mashandisiro azvo, zvikomborero zvipi zvavanazvo, kwokuzvitenga uye nezvimwe zvakawanda. Uye zvakare, kana iwe uchida zvimwe, tinokurudzira ichi chinyorwa chine hukama nezve vanopa imbwa: tinokuudza zvese.
TOPSEAS Snuffle Mat ye ...
Tonsooze Snuffle Mat ye ...
Kunyemwerera kwezuva Rug...
McNory Snuffle Mat ye...
DaiWeier Rug Kunhuwa...
1 The best olfactory met yembwa
1.1 Olfactory kudzidzira mat
1.2 Meti yakapfava ine bvunzo dzakasiyana siyana
1.3 Soft mat yekuzorodza
1.4 Meti inopeta
1.5 Kapeti yembwa huru
1.6 Kapeti inoshanduka kuita mbiya
1.7 Meti yakaita seruva
2 Chii chinonzi olfactory mats?
3 Ndezvipi zvakanakira mameti anonhuwirira?
3.1 Kudzikamisa basa remata anonhuwirira
4 Mazano ekushandisa mats anonhuwa
5 Kunotengera imbwa matinji anonhuwirira
The best olfactory met yembwa
Olfactory kudzidzira mat
IEUUMLER Snuffle Mat ye ...
Pakati pemarugi anonhuwa embwa anowanikwa paAmazon, iyi inomira kunze, ingangoita 45 cm padivi uye inowanikwa mune akati wandei akanakisa mavara. Iyo dhizaini iri nyore kwazvo asi haina kushomeka inoshanda: akatevedzana machira emucheka akasungirirwa kune perforated plastiki base, pakati peiyo mibairo inogona kuvanzwa. Kubata kwejira rakapfava uye rinopesana uye, nekuda kwehukuru hwayo, yakakwana kune imbwa diki kana dzepakati.
Iyi rug inozadzisa zvizere basa rayo, sezvo uchingofanira kutungamirira mhino yembwa yako kuti uwane mibairo uye ubate kushanda kwemutambo, izvo zvakafanira kuti arege kudya nokukurumidza.
Meti yakapfava ine bvunzo dzakasiyana siyana
FREESOO Snuffle Mat ye ...
Dhizaini yakati siyanei kubva kune mamwe maragi anonhuhwirira ndeaya emhando iyi, iyo inosanganisira chigadziko chakapfava uye miedzo yakati wandei kwekuvanza mibairo: homwe, maoko, mhete dzemachira uye kunyange rudzi rweruva rinovimbisa kuti imbwa yako haifinhi nechigadzirwa ichi.. Mucheka wakafanana neflannel, saka yakanyanya kupfava, kunze kwechigadziko, iyo isingasviki. Uyezve, inogona kushambidzwa nemuchina. Pakupedzisira, nekuda kwezviyero zvayo (36,5 cm padivi rakareba) inokurudzirwa kuishandisa kunyanya nembwa duku.
Soft mat yekuzorodza
Vehipa Snuffle Mat ye ...
Iyi anti-stress mat, yakafanana neyakapfuura, yakanakira imbwa yako kuti izorore, kunyanya kana iine hyperactive. Inosanganisira nzvimbo dzakasiyana-siyana dzatinogona kuvanza mibairo (mhete, homwe, rudzi rwemaoko, ruffles uye denderedzwa rakagadzirwa kubva kumitsetse yejira) uye rega chipfuwo chedu chiwane kunhuhwirira kwakawanda. Ichi chiitwa chepfungwa chinokusiya iwe wakaneta uye uchifara uye pamusoro pazvo, zvichibva pakuedza-mubairo kurovedza muviri, inoshandawo zvakanyanya kune imbwa dzine kuora mwoyo.
Kune avo vari kutsvaga chigadzirwa icho, kunze kwekushanda, chakanaka, vachawana sarudzo yakanaka mune iyi rug yakanaka. Yakaumbwa seruva, kunyange zvazvo, kunze kwemavara emucheka, tinogonawo kuwana dzimwe nzvimbo duku dzekuvanza mibairo, yakadai semhete dzemucheka, butterfly ine zvidimbu zvakawanda kana rudzi rwedumplings. Pamusoro pezvo, inopeteka, saka kana wapedza kuishandisa unogona kuidzosera zviri nyore.
Kapeti yembwa huru
Iyi mat inenge 50 cm muchikamu chayo chakareba chakanakira imbwa huru, kuwedzera, inoshanda zvakasiyana kubva kune yatakaona kusvika ikozvino. Inosanganisira mutsara webvudzi, zvakafanana neaya ekugeza mat, gobvu uye anenge 2 cm, umo tinogona kuvanza mibairo. Ichi chigadzirwa chinosanganisira bhegi rekuchengetedzaInogona kuiswa mumuchina wokuwachisa uye inosanganisira makapu ekuyamwa kuitira kuti irege kufamba, kunyange zvazvo mamwe maonero achisimbisa kuti haishande zvakanaka.
Kapeti inoshanduka kuita mbiya
Iyi rug inonakidza ine mabasa maviri: Chekutanga, inoshanda semameti anonhuwa embwa dzatanga tichiona, kureva kuti, mibairo yakavigwa pakati pemachira ehembe kuti chipfuwo chedu chiwane. Nekune rumwe rutivi, nenzira yakapfava mipendero yemeti inokwira yova mbiya inonyanya kubatsira pakudzidzisa imbwa yako kudya zvishoma nezvishoma.
Meti yakaita seruva
Uye tinopedzisira tave nemeti yekunhuwa iyo imbwa inogona kunhuwa sezvainoda ichitsvaga mibairo yayo. Pakati ndiyo nzvimbo huru yekutsvaga uye yakaumbwa seruva rakagadzirwa kubva kumitsetse yejira, kunyangwe paine mimwe mitambo yakatenderedza. Mukuwedzera, inopeteka, saka unogona kuichengeta pasina nguva. Jira racho rakapfava uye rinogara uye rinowachwa nemuchina. Pakupedzisira, meti yacho inosanganisira tambo mbiri kuti ugone kuisungirira kufenicha uye haizopfeki.
Chii chinonzi olfactory mats?
Kunhuhwirira kwembwa imhando yechitoyi inobvumira chipfuyo chako kushandisa pfungwa dzake, zorora uye, pamusoro payo, uwane kurapwa.
Mamiriro ekushanda kwezvinhu izvi ari nyore kwazvo: Anowanzo kuve nemhando yekapeti ine akawanda kana mashoma machira emucheka akasungirirwa pachigadziko chepurasitiki chinobvumira imbwa kunhuwa. mukutsvaga mibairo yakavigwa mairi kare. Sezvauri kuona, kuvhiya kwacho kwakafanana neicho chepurasitiki mazes umo mibairo yakavanzwa uye umo imbwa inofanirwa kufunga kuti iwane.
Muchidimbu, kuti imbwa dzinodudzira sei zvakavapoteredza kuburikidza nekunhuwa (ayo ane simba rakapetwa kane zviuru zana kupfuura vanhu), meti yakadaro inogara iri pfungwa yakanaka.
Ndezvipi zvakanakira mameti anonhuwirira?
Sezvakaita chero toyi, hwema mats kune imbwa dzine huwandu hwezvakanakira izvo zvichabatsira kuita kuti imbwa yako ifare uye izvo, kazhinji, zvichabatsira zvakanyanya kune hutano hwako, semuenzaniso:
Kutanga, bvumira imbwa kushandisa pfungwa pasina kuda nzvimbo huru.
Kushandisa pfungwa wega kunotova nemabhenefiti akawanda, semuenzaniso, a hutano hwakavandudzwa, kuderedza kushushikana, kuzorora nembwa uye kudzivirira kufinhwa.
Uyezve, kunhuwa kuita kunofadza kwazvo imbwa.
Pakupedzisira, ragi yakadaro inobatsira imbwa kudya zvishoma nezvishoma, sezvo achifanira kutsvaka zvokudya zvake asati adya.
Kudzikamisa basa remata anonhuwirira
Isu takaona mabhenefiti emateti anonhuwirira embwa, kunyangwe zvakakodzera kugara pane imwe yemabhenefiti ayo makuru: iyo kudzikamisa basa rematoyi aya.
Kazhinji (sezvaunofanirwa kuziva, kune imbwa dzezvese) basa guru remata nderekupa kurovedza kwepfungwa kumhuka yako, iyo, kudzorera, inobatsira kuidzikamisa. Nokudaro, iyo meti ichakurudzira kunhuwa kwembwa yako, iyo mushure mekunakidzwa nekukurudzira kwenguva yakareba sezvainotora (uye kuwana mibairo yakasiyana-siyana) inonzwa yakasununguka, isinganyanyi kunetseka uye kufara.
Zvese izvi kwete kungobatsira imbwa kunzwa zviri nani pamusoro pake uye nenyika yakamupoteredza (Ndeyekushandisa iyo yekare kuedza-mubairo), asi zvakare inobatsira kudzivirira maitiro anoparadza, akadai sekurumwa nekukwenya fenicha kana maragi evanhu. Zvigadzirwa izvi zvinogona zvakare kubatsira zvakanyanya nembwa dzinoshanda zvakanyanya, dzinoda zvinopfuura mafambiro adzo ezuva nezuva kushandisa simba radzo.
Mazano ekushandisa mats anonhuwa
Ipapo Tichakupa mamwe mazano anogona kukubatsiraKunyanya kana iri nguva yako yekutanga kushandisa imwe yematoyi aya:
Kunyangwe chigadzirwa chimwe nechimwe inyika, machira embwa mazhinji anowachwa nemuchina pane purogiramu yakapfava, uye kudonha kuoma kana kuoma kwemhepo. Kuzunungusa kutanga kubvisa chero mibairo yasara uye zvimedu. Zvakare, tarisa kune chigadzirwa label kuti uone kuti chinofanira kuchengetwa sei.
Usambofa wakarega imbwa yako ichishandisa meti pasina utariri wakosezvaungagona kuzvikuvadza kana kumedza chikamu chidiki kana chakatsemurwa.
Zvibvise pamberi pako kana usiri kuzvishandisa. Nenzira iyi vachaibatanidza nechiitiko chakakosha uye vachave nechishuwo chakawanda chekutamba.
Unogona kuisa mibairo, asi zvimwewo zvimwe zvinhu zvaunoziva zvinomukodzera (semamwe miriwo). Ita shuwa kuti hadzina chepfu.
Kunotengera imbwa matinji anonhuwirira
Kune nzvimbo dzakawanda, dzimwe dzisingatarisirwi, kupi unogona kuwana mameti anonhuwirira embwa. Semuenzaniso:
En Amazon iwe uchawana akawanda emhando dzakasiyana, imwe neimwe ine ruvara rwayo, basa uye maitiro. Kana iwe waita chibvumirano chavo chePrime function, nekuwedzera, vanounza kumba kwako pasina.
En mashopu anehunyanzvi seZooplus kana TiendaAnimal ivo vanewo sarudzo dzinonakidza. Chinhu chakanaka pamusoro pezvisarudzo izvi ndechekuti iwe unogona kuenda kuchitoro iwe pachako kuti uone kuti saizi, zvinhu zvakaita sei ... uye kunyange kubvunza vabatsiri vezvitoro kuti ndeipi sarudzo yakakunakira iwe nemhuka yako.
Pakupedzisira mukati dandemutande yezvinhu zvakaitwa nemaokoKufanana naEtsy, iwe uchawanawo toni yezvasarudzo zvakasiyana. Mune zvimwe zviitiko ivo vanogoneka zvizere, saka unogona kusarudza iwo mavara, zvinhu kana chimiro chaunoda zvakanyanya.
Olfactory mats embwa chitoyi chinoita zvinoshamisa kudzikamisa uye nepfungwa kudzidzisa imbwa yedu. Tiudze, wakamboedza chero ipi zvayo yemarape aya? Zvashanda? Iwe une chero matipi paunenge uchiashandisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Mameti akanakisa embwa
Akanakisa biodegradable imbwa poop mabhegi